इन्गेजमेन्टको अघिल्लो दिनसम्म आउँदा श्वेतामाथि पनि सबिनको असंख्यक दवाव – सत्य तथ्य र निष्पक्ष्य समाचारको लागि
इन्गेजमेन्टको अघिल्लो दिनसम्म आउँदा श्वेतामाथि पनि सबिनको असंख्यक दवाव
विराटनगर–३ मा कोठा भाडामा लिएर बस्दै आएकी उनी सौर्य बचत तथा ऋण सहकारी संस्था प्रा.लि.मा काम गर्दै महेन्द्र मोरङमा अध्ययनरत थिइन् । त्यसैबेला बाबुआमाको सहमति अनुसार विराटनगर–३ का २८ वर्षीय युवकसँग उनको विवाहको टुङ्गो लागेको थियो ।
श्वेताले अकास्मात् झुण्डिएर आत्माहत्या गर्नुपर्ने पृष्ठभूमि कसरी तयार भयो त ! तीनवर्षदेखि उनी मोरङ सुन्दरहरैंचा–१० निवासी सविन पराजुलीसँग प्रेम सम्बन्धमा थिइन् । विवाह गर्नका लागि उनले आफ्ना प्रेमीसँग बारम्बार आग्रह र अनुरोध गरिन् । दुवैजना महेन्द्र मोरङ क्याम्पस विराटनगर नै पढ्थे ।
तर, श्वेतासँगै जीवन बिताउने लक्ष्य नराखेका सबिनले उनीसँग तत्काल विवाहको सहमति दिन सकेनन् । त्यसपछि श्वेताले परिवारसँगको सल्लाहकै आधारमा दोस्रो केटासँग मागि विवाह गर्ने निचोड निकालिन् र सोमबार फुलमाला र असार १४ गते विवाह बन्धनमा बाँधिने निर्णयमा दुवै परिवार पुग्यो ।
त्यसपछि, पूर्वप्रेमीले यो विषय थाहा पाए । उनले श्वेताको विवाह भाँड्ने निष्कर्षका लागि पुराना आफूसँगै बिताएका तस्वीरहरु बाँड्न थाले । श्वेताको विवाह हुँदै गरेको घरसम्म बहिनी नातामा पर्ने युवतीबाट फोटो पुग्यो ।
विवाह तय गरेको दोस्रो केटाले समेत श्वेतालाई भनेका थिए–तिम्रो पहिलो प्रेमीसँग यतिधेरै माया साटिईसकेको रहेछ, अब विवाह नगरौं ! त्यसले श्वेतालाई आत्माहत्या गर्नुपर्ने निर्णयमा पुग्नु बाहेक विकल्प रहेन । कारण सबिन बनेपछि उनले आईतबार साँझ ६ बजे अन्तिम बाटो रोज्न बाध्य भईन् ।
मोरङ प्रहरीका प्रहरी नायव उपरीक्षक मानबहादुर राईले परिवारले दिइएको जाहेरीका आधारमा आरोपित पराजुलीलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान भईरहेको जानकारी दिनुभयो । प्रहरीले घटनामा बहुपक्षीय अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । मृतक श्वेताकी बहिनी सरीता पोखरेलले दिइएको जाहेरीमा सबिनसँगको प्रेम सम्बन्ध, प्रेम सम्बन्ध विवाहमाा बाँधिन नसकेपछि दोस्रो विवाह तय र त्यसपछि पुनः सबिनले दिइएको दवावको विषयमा उल्लेख गरेकी छिन् । मृतकको पोष्टमार्टमपछि परिवारले लास बुझेर दाहसंस्कार आजै गरिएको छ ।इन्गेजमेन्टको तयारी विराटनगरमा भईरहेको थियो । उदयपुर बेलका नगरपालिका–२ निवासी २४ वर्षीया श्वेता पोखरेलले आइतबार साँझ झुण्डिएर आत्मा हत्या गरिन् ।
उनको आत्माहत्या नभएर आत्माहत्या दुरुत्साहन भएको भन्दै परिवारले किटानी जाहेरी दिएपछि घटनाको भित्री पाटो बाहिर आएको छ । मृतककी बहिनी सरीता पोखरेलको जाहेरीका आधारमा आत्माहत्या दुरुत्साहन गरेको आरोपमा प्रहरीले सुन्दरहरैंचा–१० का सबिन पराजुलीलाई नियन्त्रणमा लिईसकेको छ । source
Tags: श्वेताको आत्माहत्याको कारण सविन पराजुली
Previous किन पटक पटक विवादित बन्छन इटहरीका मेयर द्धारीका चाैधरी
Next उपत्यकामा जोरविजोर लागू यातायात चल्ने
1 thought on “इन्गेजमेन्टको अघिल्लो दिनसम्म आउँदा श्वेतामाथि पनि सबिनको असंख्यक दवाव”
viagra in mexico over the counter various kinds of viagra viagrah